UNgqongqoshe uvakashele eMandeni | News24
UNgqongqoshe uvakashele eMandeni
Isithombe: SithunyelweUSomlomo womkhandlu waseMandeni uNksz Makhosazana Zungu, uSekela meya wesifunda iLembe uNkk Dolly Shandu, uNgqongqoshe uMnuz Jeff Radebe kanye noSodolobha waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu kwImbizo ebibanjwe ngeledlule.
UNGQONGQOSHE uMnuz Jeff Radebe ubambe Imbizo eMandeni ngeledlule ukuze uhulumeni, osomabhizinisi, yintsha kanye namalungu omphakathi athole ithuba lokukhulumisane ngezinto okumele zenziwe nguhulumeni ukufeza izidingo zomphakathi kanye nokuletha intuthuko endaweni lapho abantu behlala khona.
UNgqongqoshe uqale ngokuthi avakashele amahhovisi akwa SASSA, amahhovisi akwa Home Affairs, kanye ne Clinic yakulendawo.
Uthe: “Kuye kusiphathe kabi emva kokuba sibeke eceleni izizumbulu zezimali, ezibalelwa ezigidini ngezigidi , ukuba izidingo zomphakathi zisondezwe kubantu, bese nje kuba khona labo abacekela phansi yonke lemizamo emihle esiyenzayo ekuphuculeni imiphakathi yakathi kuzo zonke izifunda ezweni lakithi. Labo abakhwabanisa imali yomphakathi kumele babhekane nengalo yomthetho. Labo abavilaphayo ekusizeni imiphakathi kumele baqondiswe izigwegwe ukuze basebenze ngokuzikhandla,” kusho uMnuz Radebe.